Ugu yaraan 27 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Baqdaad oo ay masuuliyadooda sheegatay ISIS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 27 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Baqdaad oo ay masuuliyadooda sheegatay ISIS
December 31, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 27 qof oo lagu dilay qaraxyada ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad. [Sawirka: Twitter]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 27 qof ayaa lagu dilay 57 kalena waa ay ku dhaawacmeen labo qarax oo ka dhacay maanta oo Sabti ah bartamaha magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq, sida ay sheegeen booliiska iyo saraakiisha dowladda.
Booliiska ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow dukaan lagu iibiyo alaabaha baabuurta lagu dayactiro kadib markii qof isa-soo-biimeeyay uu isku qarxiyay, qaraxa kale ayaa ahaa mid la dhigay meesha, sida uu wakaalada wararka Reuters u sheegay sargaal katirsan wasaaradda arrimaha gudaha.
Kooxda dowladda Islaamiga ah sidoo kale loo yaqaan (ISIS) ayaa sheegatay masuuliyada qaraxyadaas, sida ay sheegeen warbaahinada kooxdaas macluumaadka u faafiya.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa wacad ku maray in Somailand ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto weerarkeeda gardarada ah ee ay kusoo qaaday dhulka Puntland. Isaga oo ka hadlayay shir saxaafadeed xalay oo Arbaco ahayd [...]